Banyere Anyị - Henlin Optronics (Shao XING Shangyu) Co., Ltd.
Akụkọ ihe mere eme nke search LIGHT TAIWAN CO., LTD.
Tọrọ ntọala na 1995, ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkachamara na-emepụta ọkụ ọkụ ọkụ, oriọna oriọna ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ UV, ọkụ ọkụ ọkụ ndị agha HID na ọkụ eletrik ndị ọzọ na nchọpụta ọkụ, imepụta, imepụta na ọrịre nke ụlọ ọrụ pere mpe. Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ azụmaahịa nke ijide ogo, na-agbaso ntụkwasị obi yana ndị ọrụ niile na-eje ozi. Site n'inwe nkà na njikwa sayensị dịka ntọala, ngwaahịa niile na-enwe ọfụma maka otu afọ yana ọrụ ndozi ndụ niile.
Processinglọ ọrụ nhazi nke China Henlin Optronics Shaoxing Shangyu Co., Ltd guzobere na 2008 na Zhejiang Province, China.
Iru eru akwụkwọ: All ngwaahịa rue siri nnọọ ike na-agwụ agwụ ule ụgbọ dị arọ bụ ndị ruru eru ma America na Europe ọkọlọtọ.
Zuru okè ọrụ: All ngwaahịa na-ekwe nkwa maka otu afọ.
Laser 10W tọọchị mepụtara ọma na net ibu 128g na doo anya 1km. na eze ulo oru na June 2019,na New Style XE-150 searchlight, ike 50 ~ 150W kemeghi, doo nso 1 ~ 5km, ulo oru na oge na-esonụ ọkara afọ.
HID35 ~ 100W n'elu ime akara searchlight e ọma mepụtara na na ndokwa ka e depụtara na nkera nke abụọ nke afọ.
Ikanam 0 ~ 40W UV tọọchị na ndokwa ka e depụtara na July.
zoro 35 ~ 100W stepless mgbanwe dị arọ mepụtara ọma.
The imewe na mmepe nke Ikanam obere ulo oru UV tọọchị.
merie ịzụlite UPH 80/120 ike search ọkụ na cob onye obere mgbawa na-àmà ọkụ,
ọ ga-edepụtara na njedebe nke afọ.
N'ihi SARS ọrịa, anyị ụlọ ọrụ nke ọma mepụtara a ọhụrụ ụdị obere onye sterilizer DUV-5.
-emepe emepe na 100W searchlight, ìhè anya nwere ike ịbụ ihe karịa 2500M, na ya ga-etinye na ahịa na 2013.
The ịga nke ọma nke ọhụrụ li-ion batrị 26650 development. Mgbe tinye ya ọhụrụ zoro searchlight, ọ na-eme ka ọkụ oge okpukpu abụọ ma ọ bụrụ na-ruo eruo na otu ụdị searchlight.
merie mepụtara SLD-24 ìhè mmiri, na nwetara asambodo nke IP68 (mmiri n'okpuru osimiri 70M).
Na nzaghachi echiche nke green ike, ike nchekwaba na carbon Mbelata, anyị mepụtara streetlamp na elu arụmọrụ na elu luminous.
Ịga nke Ọma n'ụzọ zuru ezu mepụtara SLD-24 ọhụrụ ngwaahịa: SL-2030, HL-3050, SL-3570.
Na-eme ka a nnukwu ihe nweta nke ahịa.
Anyị na-amalite ịzụlite elu ike zoro site na iji BPS mgbanwe ọrụ na ocho oru izugbe ụlọ ọkụ na ndị ọzọ na pụrụ iche ojiji.
Na nkera nke abụọ nke 2008, anyị na-elekwasị anya na-emepe emepe nke 10W / 20W ala ike zoro obere ọwa. 50W / 70W elu ike search ọwa nke na- ikpo site agha ná mba ụfọdụ.
Iji BPS mgbanwe digital usoro ọrụ na-emepe emepe 30W / 50W zoro anya search ìhè na 20W / 30W zoro onye ìhè dara nha search ìhè.
Ma anyị na-ọma mepụtara iche iche iche iche nke oghere, eg ultraviolet oghere, infrared oghere, oghere maka mkpịsị aka n'akara, ọbara tụlee ndị ọzọ anya m mkpa ekperima nnyocha.
Anyị nwekwara mepụtara ìhè akwukwo nri si na-eto ma na-ewetara ndị search ìhè n'ime ọhụrụ ubi nke technology ngagharị.
merie mepụtara BPS mgbanwe digital usoro, kpatụ mmepụta watt, na-agbanwe ike nke ìhè kpamkpam.
Ma anyị na- inweta nchọpụta Kemịkalụ na Japan, China, Taiwan na Korea.
emepe 1-to-2 ụgbọ dị arọ, na-eme ndị zoro ọkụ ihu maka ụgbọ ala na-aghọ ezi uche na-ewu ewu.
merie wetara abụọ ụdị ngwaahịa ahịa, ndị zoro 50W xenon oriọna na agha / uwe ojii na-enyocha ìhè.
Na-eme ka anya anya wider ma odi mfe.
Copyright - 2010-2019:
All Rights echekwabara.
Handlight Chakwasa ihie , Marine Dugara Searchlight , Criminal Investigation Searchlight Torch ,
4F, No, 18Ln.83, Sec.2, Zhongxing Rd,
Wugu Dist, New Taipei City,
Fax: + 886-2-29889404
UV-265 foldable bactericidal igbe na-emepụta ...
Ozi dị mkpa: Na Eprel 2020, Marine C ...